सेयर बजारले अढाई वर्षमा ७ खर्ब कसरी गुमायो ?
काठमाडौं । गएको अढाई वर्ष यता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क लगातार खस्किएपछि त्यसले खर्बौँ रुपैयाँको पूँजीकरण परिमाणमा ह्रास बेहोरेको बताइन्छ।
लगानीको मन बनाउँदा केमा ध्यान दिने?
मूल कुरा जुन कम्पनीको सेयर किन्ने हो त्यसको बारे विस्तृत जानकारी हुनुपर्छ। त्यसको वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावनामा ध्यान दिनुपर्छ। सेयरमा लगानी गर्नुभनेको उक्त कम्पनीको स्वामित्वसँगै दायित्व पनि लिनु हो भन्छन् जानकार दिलीप मुनकर्मी। "सेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको व्यवसाय, व्यवस्थापन, मुनाफा, बजारहिस्सासँगै बजारमा उक्त कम्पनीको साख, विगतको र सम्भावित मूल्यको उतारचढाव, खुद मुनाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांस क्षमता र लाभांस नीतिसमेतमा ध्यान दिनुपर्छ।" साथै सेयरमा लगानी गर्ने कि कारोबार? लगानी गर्दा कति वर्षसम्मको लागि? कारोबार गर्ने भए कतिको नाफा वा नोक्सानीमा बेच्ने? यी कुरा बुझेर लगानी गर्नु बेस हुने जानकारहरूको सुझाव छ।
सेयरबजारको ज्ञान कहाँबाट कसरी पाउने?
अर्का सेयरबजार जानकार ज्योति दाहाल भन्छन् नेप्से र धितोपत्र बोर्डका आधिकारिक वेबसाइट देखि लिएर विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूबाट सामान्य जानकारी पाउन सकिन्छ। मुनकर्मी थप्छन् - कि पढेर जानिन्छ कि परेर। पढेर वा आवश्यक ज्ञान सहित लगानी गर्दा जोखिम बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। "हामीले सामान्यज्ञान र सेयरसम्बन्धी जानकारीका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट, नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटबाट ऐन कानुन, नीति नियम, जारी भएका वा हुने सेयरको सम्बन्धमा जानकारी पाउन सक्छौँ।" कम्पनीहरूका त्रैमासिक विवरण, र वार्षिक प्रतिवेदन पनि ज्ञानका अन्य स्रोत हुन्।
अहिले घाटा भएकाहरूले के गर्ने?
दाहालको सुझाव छ तत्कालका अङ्कका 'खेलहरू' बाट तर्सनुभन्दा गहिरो सोचका साथ नै आफ्ना घाटा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। मुनकर्मी यसलाई अझ व्याख्या गर्दै भन्छन् - "सेयरमा घाटा भनेको किनेको मूल्यभन्दा सस्तोमा बेचेर निस्कँदामात्र वास्तविक घाटा हुन्छ र अहिले पोर्टफोलियोमा देखिएको घाटा केवल सम्भावित घाटा (भर्चुअल लस) मात्र हो। जबसम्म सेयर बेचिन्न घाटा हुन्न। अहिले बजारमा सेयरको मूल्य घटेको अवस्थामा क) आफूसँग थप लगानी गर्ने र जोखिम लिने क्षमता छ भने अहिले सस्तो र भविष्यमा बढी नाफा हुने सम्भावना भएको कम्पनीको सेयर किनेर औसत लागत घटाउने, ख) लगानी गरिएका कम्पनीहरू वा आफ्नो पोर्टफोलियोबाट कम प्रतिफल आउने वा भविष्यमा पूँजीगत लाभ हुने कम्पनीहरूसँग अर्को बढी लाभ हुने कम्पनीको अदलाबदली गर्ने, ग) लाभांसको प्रतिफल दर उच्च भएका कम्पनीहरूको सेयर किन्ने।"
नयाँ लगानीकर्ताले के गर्नुपर्छ?
प्राय: घट्ने चक्रबाट गुज्रिरहेको बेला राम्रा कम्पनीका सेयर किन्न सके भविष्यमा त्यो बढ्ने सम्भावना धेरै हुने संसारभरकै सेयर विश्लेषकहरूको सुझाव हुने गर्छ। यतिखेर नेपालमा पनि खासगरि नयाँ लगानीकर्तालाई प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ)को सेयर किन्दा जोखिम कम हुने मुनकर्मीको सुझाव छ।
एउटा चढावको चक्र पश्चात् उतारको चक्र हुने गरेको छ। (बीबीसी नेपाली सेवा)
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार ०७:३६:०० मा प्रकाशित